Tetikasa tanamasoandro :: Mandà ny hanotofana ny tanimbary ny mponin’Ambohitrimanjaka • AoRaha
Misy hevitra 2
Tetikasa tanamasoandro Mandà ny hanotofana ny tanimbary ny mponin’Ambohitrimanjaka
Miahiahy. Mano­hitra ny hanotofana ny lemak’ Ambohitrimanjaka ny mponi­na ao an-toerana mikasika ilay tetikasam-panjakana
amin’ny fanorenana tanàna vaovao na Tanamasoandro. Mihevitra ny mponina fa hanimba ny foto-piveloman’ izy ireo ny fananganana an’ ity Tanamasoandro ity. Saika mbola mivelona amin’ny fambolena sy ny fiompiana ny ankamaroan’ny olona amin’ iny toerana iny. Manatante­raka fivoriam-pokonolona hatrany ny mponin’Ambohitri­manjaka amin’ny hanoherana an’io tekisam-panjakana io.
« Ny fanitarana ny lalana no efa tsy ekenay satria rehefa misy lalana eo ka tsy maintsy hiafara amin’ny fonotofana tanimbary ihany. Mbola miaina anatin’ny fambolena sy fiompiana ny olona ety aminay. Isan’ny hipetraka amin’io tanàna io koa ve izahay raha tafatsangana izany? », hoy ny solontenan’ny mponina ao amin’ny fokontany Anosivita Ambohitrimanjaka.
An-kilany, tsy mandà ny hanorenana ny fotodrafitrasa kosa ny sasany saingy tsy tokony amin’ny toerana misy ny fivelomam-bahoaka no hanaovana ny fanorenana.
« Tsy ratsy ilay tanjona ary liam-pandrosoana koa izahay. Mbola misy tendrombohitra malalaka tsara manodidina an’Antananarivo. Na inona na inona fampandrosoana hatao dia ny tantsaha no mila tsinjovina voalohany », araka ny fanampim-panazavan’ireo mponina.
An-daniny, efa miroso amin’izao fotoana izao ny dingana fanatanterahana ny Tanamasoandro. Efa nijery ifotony ny fivoahan’ny rano sy ny lakandrano teny an-toerana ny avy ao amin’ny Manamahefa miaro amin’ny tondra-drano eto Antananarivo (Apipa), tamin’ny talata lasa teo. Isan’ny nana­tanteraka fitsidihana ihany koa afak’omaly, ireo mpandraharaha avy any Shina miisa iraika amby roapolo ao amin’ny fikambanana mane­ran-tany amin’ny toekarena miray hina sy sosialy niaraka tamin’ny solontenan’ny mini­siteran’ny Fanajariana ny tany, toeram-ponenana sy ny asa vaventy.
Nohamafisin’izy ireo ny fahavononana eo amin’ny lafiny ara-bola sy ara-pitaovana ilaina rehetra amin’ny fanatontosana ny asa. Tsy hihemotra intsony, araka izany, ny fanorenana ny tanàna vaovao.
A qui profiterait réellement le projet Tanamasoandro ? - CRAAD-OI dit :
[…] (5) https://aoraha.mg/20/09/2019/tetikasa-tanamasoandro-manda-ny-hanotofana-ny-tanimbary-ny-mponinambohi&#8230; […]
A qui profiterait réellement le projet Tanamasoandro ? – CRAAD-OI dit :
23/02/2020 à 10:28
« Visa »
Ambohimangakely :: Efa potehina tsikelikely ilay vatobe mitatao